Esi edozi nsogbu na mkpisiaka mkpịsị aka gị na gam akporo ngwaọrụ | Gam akporosis
Otu n'ime ihe ndị na-akawanye mma oge na ngwaọrụ bụ a na-agụ mkpịsị aka, ihe dị mkpa iji nwee ike mepee ekwentị ma ọ bụ mbadamba ngwa ngwa. Iji mee nke a, ị ga-ahazi ya na ọdụ gị, ma na mbido ma ọ bụ ikekwe emesịa na ntọala.
Mgbe ụfọdụ ọ na - eme na onye na - agụ mkpịsị aka na - enye nsogbu, ma ọ bụ n'ihi unyi, inwe esemokwu ma ọ bụ njehie ọzọ nke a na-amakarị. Dị ka a na-achị, ha na-abụkarị ndị kwesịrị ntụkwasị obi na ngwa ngwa mgbe ị na-etinye mkpịsị aka gị na ya, ma ọ bụ na ihuenyo ahụ, n'akụkụ ma ọ bụ azụ.
Mgbe ụfọdụ ọ na-adị mkpa hichaa ebe ahụ, tọgharịa onye na-agụ mkpịsị aka ma gbanwee ya ọzọ, yana ihe ndị ọzọ iji gbalịa idozi nsogbu a. Dabere na onye nrụpụta na ụdị, akara mkpịsị aka ga-agbanwe, ya mere, ọ dị mfe ịchọta saịtị ebe ọ dị maka nhazigharị ya.
1 Hichaa ebe ihe mmetụta dị
2 Kpochapu akara ukwu ma bido na ncha
3 Weghachi ekwentị ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ngwọta abụọ nwere ike ịrụ ọrụ
Hichaa ebe ihe mmetụta dị
N'okwu anyị, a na-etinye aka akara mkpịsị aka n'ime ihuenyo (Huawei P40 Pro), mana nke a ga-adịgasị iche dabere na ụdị nke ị nwere, ma ọ bụ ekwentị nwere azụ ma ọ bụ onye na-agụ ya n’akụkụ. Ya mere lelee mkpọchi ahụ, dịka ọmụmaatụ ọ dabara adaba iji akwa microfiber hichaa ebe ahụ.
A pụkwara iji obere microfiber jiri hichaa mmiri dị ọchaKa ọ dị ugbu a, a na-ere ngwaahịa maka ihe ngebichi na saịtị pụrụ iche, kwesịrị ekwesị maka iwepu unyi na nje. Ọ kachasị mma ịmebe akwa ahụ mgbe niile wee kụọ mpaghara a kapịrị ọnụ nke ihe mmetụta ahụ ka ọ dị ọcha ma hapụ ya ka ọ kpoo nkeji ole na ole tupu i jiri ya.
Kpochapu akara ukwu ma bido na ncha
Otu n'ime ngwọta edozila nsogbu nke akara mkpisiaka na ngwaọrụ gam akporo bụ ịmalite site na ncha, na-ehichapu akara ukwu na imeghari ya. Ndị na-emepụta ekwentị na-atụ aro ime nke a opekata mpe otu oge kwa oge, ụfọdụ na-akwado nke a ka ọnwa isii gachara.
Iji wepu akara ukwu anyị ga-enweta Ntọala> Biometrics na paswọọdụ> ID mkpisiaka > Tinye koodu ma ọ bụrụ na ị nwere maka mkpọchi, Ntuziaka ID 1> Hichapụ. Ozugbo ehichapụ, malite ncha site na ịpị "Kpọghe ngwaọrụ"> Debanye aha mkpịsị aka, tinye akara mkpịsị aka ma chere iji mezue ya ka agbakwunye ihe ọhụrụ.
Na ụdị ndị ọzọ ị nwere ike ịchọta mkpọchi ihuenyo na Ntọala> Nche na ọnọdụ> Mkpịsị aka, nweta akara mkpisiaka, hichapụ nke edebanyere aha na ọ bụ ya. Mgbe ahụ ị ga-enyerịrị otu oke ahụ ma denye akara mkpisi aka na "Hazie", chere usoro niile ma chekwaa nhazi ahụ iji nwee ike iji ya.
Weghachi ekwentị ma ọ bụrụ na nke ọ bụla n'ime ngwọta abụọ nwere ike ịrụ ọrụ
Nzọụkwụ ikpeazụ ga-abụ iji weghachi ekwentịỌ bụ nke kasị sie ike, ikekwe nke ị na-agaghị eme ọ gwụla ma akara mkpisiaka na-emeghe mgbe niile. Ime ya ihe kachasị mma bụ ịga n'ihu nke a nkuzi nzọụkwụ site na nzọụkwụ, kwa dị na vidiyo a sị na o yiri ka ọ bara uru karị.
Ozugbo inwee ike iweghachite ya, hazigharị ihe mkpisiaka aka wee lelee na ihe niile na - arụ ọrụ dịka ụbọchị mbụ, ọ ga - adaba adaba ka ị nwee nkwado ndabere nke data dị mkpa ekwentị. Nke a na - edozi nke ọ bụla chinchi ị nwere na mbụ ọ ga - arụ ụlọ nrụnye ihe niile ị nwere mgbe ịmalitere ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Nkuzi » Esi edozi nsogbu na mkpisiaka mkpịsị aka na ngwaọrụ gam akporo gị